Ukuvumelanisa i-Microstation ne-Google Earth-Geofumadas
Epreli, 2014 cadastre, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
I-Google Earth ibe yithuluzi elingenakukhunjulwa kwiinkqubo zethu zangoku ze-cartographic. Nangona kunemida kunye neziqhamo zokukhulula, yonke imihla bayichaza ezininzi iziphene, kwesi sixhobo sinokuthi i-geolocation kunye nokuhamba ngeemephu ziyaziwa kakhulu namhlanje. Ngoko ke sinesidingo esininzi seenkonzo zobugcisa.
Ngenxa yale njongo, kwi-8.9 inguqu ye-Microstation, i-Bentley idibene nomsebenzi oquka izixhobo ezisisiseko ukuvumelanisa umbono weemephu kunye nokuthunyelwa kweGoogle Earth.
1. Inkqubo yokucwangcisa kunye nenkqubo yesetyenzisiweyo kufuneka inikezelwe kwifayili.
I-Microstartion ivumela ukudala nokuhlela iifayile eziphathekayo kwiifom ze-DWG, i-DGN kunye ne-DXF; Nangona kunjalo, abanalo i-georeference xa bebizwa ngokuba yi-GIS system. Okungenjalo kungekho kumgangatho oye waqaphela kwiifayile ze-CAD, nangona iiprogram zangaphakathi zinalo griference.
Ukunika i-georeference yefayili ye-CAD kwi-Google Earth, yenziwe:
Izixhobo / iGeospatial / Geospatial.
Ngaphakathi kule bar kukho i icon ethile «Khetha inkqubo yolawulo lwendawo«. Ukusuka apha sikhetha, kule meko, inkqubo eqikelelweyo: I-UTM yeHlabathi, idatha: I-WGS84 kwaye ke loo ndawo kwimeko yethu yi-16 Northern Hemisphere.
Ukuze ungabibizi olu qulunqo rhoqo ngexesha elifunekayo, ndinga nqakraza ngokukhawuleza ndize ndongeze kwiintandokazi. Oku kuboniswe ngasentla, kwiifolda zentandokazi.
Ngaloo nto, iDGN sele ifumaneke kwaye iququzelele inkqubo.
Thumela ifayile kwiGoogle Earth.
Oku kwenziwa ngeqhosha lefayile ye- “Export Google Earth (KML). Oku kusebenza kakuhle, ngokulula inkqubo icela igama kunye nendawo yokugcina, kwaye ngokuzenzekelayo iphakamisa iGoogle Earth ngento; xa uyibonile indawo, iyenzeka ngaphandle kokulahleka. Ukuba igcinwe njenge-kml, iya kudala ifayile enye yazo zonke iivenkile, ukuba igcinwe njenge-kmz iya kwenza iifolda kwinqanaba ngalinye; Kuzo zombini iimeko, iya kugcina isimboli, kubandakanya ukuthumela izinto ze-3D.
Xa senza utshintsho, sikhetha ukuthumela ngaphandle kwakhona, kunye nemibuzo ye-Google Earth ukuba sifuna ukutshintsha ifayile ejongelwayo.
Vumelanisa imbono neGoogle Earth
Ngoku kuza okulungileyo. Unako kusuka kwi-Microstation, cela i-Google ukuba ivumelanise isibonakaliso ngombono esinawo kwi-Microstation. Efanelekileyo
Ukongezelela, sinokuthi, ukuba umbono we-Microstation uvumelaniswe noko iGoogle Earth ibonise.
Akubi, ucinga ukuba kumaxesha amaninzi awunayo umfanekiso wendawo osebenza kuyo, okanye ufuna ukuyisebenzisa ngokunxulumene nolwazi lwe-Google Earth olunxulumene nokufotowa ukusuka kwiminyaka edlulileyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iingcebiso 5 malunga nokhuseleko yeqela survey
Post Next Nceda iinkonzo ze-WMS kwi-MicrostationOkulandelayo "